Gabadh Soomaali ah oo u banbaxday shaqo ay ragga caan ku yihiin - BBC News Somali
Gabadh Soomaali ah oo u banbaxday shaqo ay ragga caan ku yihiin
Shaqada korontada waa mid ka mid ah shaqooyinka ugu adag uguna halista badan, waxaana inta badan ka shaqeeya ragga, inkasta oo aysan jirin sharci meel ku yaala oo sheegaya in ragga kaliya ay ka shaqeeyaan.
Hasayeeshee waxaa jira hablo sida ragga oo kale howshan u soo jeestay, kuwaas oo la sheegay in ay u qabtaan si hufan.
Shaadiya Xasan, inta la og yahay waa gabadhii ugu horreysay ee jaamacadaha Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax bannaanida ee Somaliland uga soo baxda cilmiga korontada, waxaanay hadda xirfadan kaga shaqaysataa magaalada Hargeysa.
Shaadiya waxa ay sheegtay inay ahayd gabadha kaliye ee dhigatay maadadan fasalkeeda, waxa ayna tiri " Intii hore oo dhan wey igu adkayd oo walaac badan ayaan ka muujiyey, waxwalba hammiga iyo hiigsiga aad nolosha ka leedahay ayaa ka weyn".
Barshada cilmgigan ayaa ah mid aad u adag ayna ku dheehayntahay carqalado badan ee dhanka hirgelinta shaqadaada balse Shaadiye waxay xiisayn jirtay maadadan ilaa intii yarayd, ayna dhiiragelinta ugu weyn ay ka heli jirtay marka ay aragto gabdhaha wadamada kale ee xirfadan meel heer ah ka gaaray.
Shaadiye ayaa sheegtay intii ay cilmigan baranaysay inay caqabado badan la kulantay waxayna tiri " fikradaha dadka ayaa ahayd caqabadii ugu weyn oo ay badan kood I niyad jabin jireen iyo in shirkadaha waaweyn ee inta badan shaqooyinkan loo sameeyo ay ku yiraahdan gabadh ayaa tahay oo ay ku qiimeeyan ayagoon ogayn heerka ay tacliintaada gaarsan tahay"
Mar la weydiiyey Shaadiye inuu shaki galay inay shaqo weyn doonto ayaa waxa ay ku jawaabtay, "badanaa dadka waxa ay niyad jabaan marka ay cilmiga u bartaan si ay ugu helaan balse aniga waa wax aan jeclahay weligayna maka walaacin inaan ka shaqayn doono"
Halista shaqadan ayaa badan balse Shaadiye maxay tan ka tiri " waxkasta oo la qabanayo halisteeda ayuu leeyahay ha ugu darnaato korontada, haddii aad shil ama wayeelo kaa soo gaarto aad ilbiriqsi ku dhiman kartid, cabsideedana wey badantahay oo mararka qaar waxaad ka cabsanaysaa inaad tagto meelaha duurka ah aad tagtid marka waxaa lagaaga baahanyahay inaad marwalba martid mashruucda badbaadada"
Fariinta ay hablaha doonaya inay bartaan cilmigan balse u arka inuu adagyahay ayaa tiri " Bulshada ayaa si fiican u aqoonin shaqadan, marka habalaha badankood shaqadan waa laga cabsiiya, waxaana gabdhaha u sheegayaa in shaqadan aysan ahayn mid adag, oo ay tahay mid siinayso hablaha fursad ay ku shaqeeyan ayagoo jooga guryahooda."
Muxuu yahay hammiga Shaadiye?
" Hammigayga wuxuu yahay in marwalba qoys walba oo Soomaali ah uusan ayaa ah uu koronto jaban ugu isticmaali lahaa walwal la'an ayagoon ka cabsanin taas oo aan ku xoojinayno inay isticmaalan tamarta dabiiciga ah." Ayay tiri Shaadiya oo doonaysa in ay meel sare ka gaarto hawshan.
Adeegga korontada waa mid aad muhiim u ah, kuna xiran inta badan nolosha bini'aadamka casrigan la joogo, waxaana aad u badan dalabka dadka ee korontada, sidaas awgeed waxaa markasta jira shaqooyin ka banaan qeybtan.
Dadka xirfadda leh sida Shaadiya, kana go'antahay shaqada, waa kuwa loogu jecelyahay.